ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင်
Posted by Mg Ogga on Dec 11, 2011 in Drama, Essays.. |4comments
စနေမောင်မောင်၊ ရာဟုမောင်မောင်၊ ကာတွန်းမောင်မောင်တို့ စသဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် မောင်မောင် များစွာရှိသည်။ အခု ကျွန်တော်ပြောပြမည့် မောင်မောင်ကား ဖေ့ဘုတ်မောင်မောင် ဖြစ်လေသည်။
ကျနော်လဲ ဂေဇက် မောင်မောင် အနေနဲ့ ပီယ၀ါစာ လေး ပြောလိုက်ဦးမယ် အနော့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ ဒါလေး နုတ်စ် အဖြစ် ပြန်တင်ပါရစေဗျာ။
ဒီ လင့်ခ် ကိုလဲ ထည့်ပေးပါ့မယ်…. နော် နော် နော်…….း)
ဖေဘုတ်မှာလည်း ကျနော်တင်ထားပါတယ် Mg Ogga နာမည်နဲ့ ပါပဲ ငွေကြေးအကျိုးမြတ် အတွက် မဟုတ်ရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကူးယူဖော်ပြနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ